किन बुझ्ने बाँदर?
बढ्दो मानव-बाँदर द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान गर्ने हो भने सन्तुलित वनको अवधारणा नअपनाई सुखै छैन।
युक्रेनको सङ्कट नेपाललाई पाठ
एमसीसी प्रकरणपछि के नेपाल पनि युक्रेन जस्तै ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको साम्राज्यवादी गतिशीलताको चेपुवामा पर्न लागेको त छैन?
‘देउवाजीलाई प्रदेशको परिणामले झस्कायो, म दोस्रो चरणमा पुग्छु’
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रदेश समितिको निर्वाचन परिणामले आफूलाई उत्साहित बनाएको बताएका छन्।
चीन र अमेरिकाको चेपुवामा दक्षिणएशिया चीनको विश्वव्यापी रूपमा विस्तारित भूमिका तथा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी विशेष चासोले नेपाललाई निकट भविष्यमा पक्का प्रभाव पार्नेछ।
महामारीमा शिक्षा : प्रविधि प्रयोगमा ढङ्गै पुगेन शिक्षालयहरू खोल्ने कि बन्द गर्ने अहिलेको सङ्कथन यही हो। सिकाइ र पढाइ जोड्ने कला अपनाए यो सङ्कथन बदलिन्थ्यो नि! विद्यार्थी प्रथम भन्ने चिन्तन शिक्षक तथा प्राध्यापकमा आए यो सङ्कथन बदलिन्थ्यो नि!
बीपीका आखिरी दिनहरू “मैले जनमत संग्रहको नतीजाको विरोध गरेको भए गृहयुद्ध हुने डर थियो। सयकडौं मानिस मर्न सक्थे। मैले इतिहासको त्यत्रो बोझ बोकेर बाँच्न चाहिनँ।”
कोरोना संक्रमितलाई डा. भगवान कोइरालाका चार सुझाव नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले कोरोना संक्रमितलाई यी चार वटा अवस्थामा अनिवार्य अस्पताल जान वा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको दृष्टिमा शिक्षा बजेटका पाँच कमजोरी शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि विनियोजित शिक्षा बजेटमा पाँच कमजोरी औंल्याएका छन्।
कोरोनामा अमेरिकाका नेपालीभाषीलाई के भयो ? कोभिडले हामीमा ठूलो कम्पन ल्यायो। परोक्ष र भर्चुअल भन्ने शब्द व्याप्त भयो। क्यानडा–अमेरिकामा चलेका धेरैजसो नेपाली–कक्षा परोक्ष भए। किताब विमोचन, कवि सम्मलेन, छलफल आदि सामाजिक सञ्जालमा बढी नै देखिए ।
कांग्रेस–कार्यकर्ताका सात ‘खराबी’ हाम्रो छैटौं खराबी अध्ययनको ठूलो कमि हुनु हो । हामीले इतिहासका बितेका घटनाहरूका प्रकाशमा वर्तमान राजनीतिको बाटो पनि पहिल्याउनुपर्दछ । हामी त्यसो गर्दैनौं । उदाहरणका लागि पार्टीको घोषणापत्रसम्मको उपयुक्त ज्ञान नभएका धेरै साथीहरूलाई मैले देखेको छु।